बाबुको मुख हेर्न आएका सबिन सुन्दरीजलमा पौडी खेल्दा बेपत्ता, नेपाली सेनाको खोजी कार्य जारी [हेर्नुहोस् भिडियो] - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»बाबुको मुख हेर्न आएका सबिन सुन्दरीजलमा पौडी खेल्दा बेपत्ता, नेपाली सेनाको खोजी कार्य जारी [हेर्नुहोस् भिडियो]
बाबुको मुख हेर्न आएका सबिन सुन्दरीजलमा पौडी खेल्दा बेपत्ता, नेपाली सेनाको खोजी कार्य जारी [हेर्नुहोस् भिडियो]
By पूजा बानियाँ on २५ भाद्र २०७५, सोमबार ११:१० भिडियो
पिएनपिखबर,भक्तपुर। २३ वर्षीय सबिन तामाङ कुसे औशीको दिन गोकर्नेश्वोर, महादेवस्थानमा मेला हेर्न आफ्ना केहि साथीसँग घरबाट हिडेका थिए। कुसे औसीको दिन नेपाली संस्कृति अनुसार बुबाको मुख हेर्ने चलन भएकाले छ महिनाको छोरी सहित उनकी श्रीमती नगरकोट स्थित आफ्नो माइत गएकी थिइन्।
उनी पनि आफ्नो बुबाको मुख हेर्न माकालबारी आएका थिए। सबिन लगनखेल बस्छन् । उनीहरु छुटिएर बसेको वर्ष दिन जति भइसकेको थियो। तर पारिवारिक भेटघाट भने भइराख्थ्यो मेला पनि हेर्छु बुबाको मुख पनि हेर्छु भनेर उनी गएका थिए।
कुसे औसीको दिन लागेको मेलामा रमाइलो गर्ने क्रममा उनले मदिरा सेवन गरेका थिए। उनी अर्धहोस अवस्थामा थिए। अत्ति नै गर्मि भएकोले उनले महादेवस्थान नजिकैको ड्याममा पौडी खेल्छु भनेर हामफाल्न तयार भए।
सबिनले ड्याममा डुबुल्की मारे। एक पटकको डुबुल्की पछि उनी फेरी ड्यामबाट माथि आए र पुन: डुबुल्की मारे। यसपटक भने उनी माथि आएनन्। प्रतक्षदर्शीको भनाई अनुसार उनी डुबे। उनको अत्तोपत्तो भएन। करिब साढे १२ बजे यो घटना घटेको थियो। सबिन डुबेको नै हो भनेर त्यहाँका प्रतक्षदर्शीले उद्दार टोलिलाई खबर गरे।
खबर पाउनासाथ नेपाली सेनाको श्री नं. १ विपद व्यवस्थापन गणको नं. २ उद्दार गुल्म गोकर्ण पोस्टबाट उद्दार टोलि घटनास्थलमा पुगेका थिए। उनीहरुको उद्दार कार्य जारि नै छ। उक्त उद्दार टोलीका कमाण्डर सह से. अर्जुन खड्काका अनुसार खोजि कार्यका लागि बोटमा सेनाहरु खटिरहेका छन्। तर अझै पत्ता भने लाग्न सकेको छैन। अब उनीहरुको अन्तिम विकल्प भनेको अन्डर वाटर सर्च भन्ने डिभाइस रहेको छ। पानी धमिलो भएकोले उक्त डिभाइसले खासै काम नगर्ने कमाण्डरको भनाई रहेको छ। तर पनि प्रयास भने जारी रहेको उनले जानकारी दिए।
उक्त घटना घटेको २४ घण्टा भइसक्दा पनि अजाही सबिन नभेटिएकाले उनको परिवार चिन्तित छन्। उनको आमाको अवस्था पनि विक्षिप्त छ। उनकी श्रीमती भने नगरकोटबाट घटनास्थल आउदै छिन्।